Nyanzvi: Zanu PF Yauraya Bhanga Guru reNyika
Nyamavhuvhu 23, 2010
Vamwe vakuru vakuru muZanu PF vanonzi havasi kudzosera zvikwereti zvavakapihwa nebhanga guru renyika, iro rakatarisana nedambudziko rekushaya mari.
Vakuru ava vanonzi vakapihwa zvikwereti izvi nagavhuna webhanga iri, VaGideon Gono, asi havasi kudzosera zvikwereti izvi. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti maitiro aVaGono ekungomwaya mari zvisina gwara, ndizvo zvakakonzera kuti bhanga iri rirasikirwe nehupfumi hwaro.
Hazvisi kuzivikanwa kuti imari yakawanda zvakadii yakakwereteswa vakuru vari muZanu PF nebhanga iri.
Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mari iyi inosvika kumamiriyoni akawanda zvikuru, zvekuti dai zvikwereti izvi zvakadzorerwa, dai bhanga iri risiri mumadhaka mariri ikozvino. Bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rinonzi rava kugumura vamwe vashandi, uye kuendesa vamwe vashandi varo pamudyandigere, sezvo risina mari yekuvabhadhara.
Makambani akawanda akaendesa bhanga iri kumatare edzimhosva achida kupihwa mari yawo yakarova iri mumaoko mebhanga iri.
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vari kunetsana nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamusoro pekugadzwa kwakaitwa VaGono segavhuna webhanga iri VaMugabe vasina kusuma mumwe wavo sezvinodiwa nechibvumirano cheGlobal Political Agreement.
VaMasimba Kuchera ndivo mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Coalition on Debt and Development. VaKuchera vanoti zviri pachena kuti VaGono ndivo vakapfugamisa bhanga iri kubva pavakagadzwa sagavhuna webhanga guru renyika muna 2003.